बेली फ्याट लुकाउनको लागि फेसन तरिकाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
बेली फ्याट लुकाउनको लागि फेसन तरिकाहरू
घर सुन्दरता महिला फेसन महिला फेशन ओआई-अम्रिशा द्वारा आदेश शर्मा | अद्यावधिक गरिएको: सोमबार, फेब्रुअरी,, २०१ 2013, ११:88 [IST] बेली फ्याट लुकाउनको लागि फेसन सुझावहरू बेली फ्याट लुकाउन यी ड्रेसहरू लगाउनुहोस्। बोल्डस्की
त्यहाँ वजन घटाउने र पेटको बोसो बसाउने धेरै आहार योजनाहरू छन्। जे होस्, जब तपाईं वजन घटाउने आहारमा हुनुहुन्छ, तपाईंलाई परिणामहरू हेर्न समय चाहिन्छ। त्यतिन्जेल तपाई केवल एक चीज मात्र लुकाउन चाहानुहुन्छ तपाईको टमिंग पेट। त्यहाँ धेरै छन् फेसन चालहरूले तपाईंलाई आफ्नो पेटको फ्याट सजिलै लुकाउन मद्दत गर्दछ।
सही लुगा लगाउँदा तपाईंको फिगर फ्लान्ट हुन सक्छ र स्टाइलिश पनि देखिन्छ। त्यहाँ धेरै पोशाकहरू छन् जुन बुल्गी वा फ्याट भएका महिलाहरूको लागि लक्षित छ। यदि तपाईं मोटो हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले बोक्नुहुने फेशन स्टेटमेन्ट पातलो महिलाबाट भिन्न हुनुपर्छ। उदाहरण को लागी, एक पातलो फिट शीर्ष एक पातलो र अग्लो आंकडा मा राम्रो देख्न सक्छ। जहाँसम्म, पेट पेट फ्याट भएको एक महिलाले स्लिम फिट टी-शर्ट वा शीर्ष लगाउँछिन् भने, उनले बल्जिंग पेटलाई फुलेको पार्नेछ।
त्यसकारण, बगिरहेको ट्यूनिक टप्स, कुर्तिस, साडी, गाउनको वरिपरि लपेट्नुहोस्, जीन्स, ज्याकेटहरू आदि महिलाहरूका लागि चमत्कार गर्न सक्छन् जसले आफ्नो पेटको फ्याट लुकाउन चाहान्छन्। प्रिन्ट्स लगाउनु भनेको फेसनिक तरिकाहरूमध्ये एउटा हो जुन बल्जिंग पेट फ्याटलाई सजीलै लुकाउन सक्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं केहि लगाउन चाहनुहुन्छ जुन तपाईंलाई राम्रो लाग्दछ र तपाईंको पेटको बोसोलाई पनि लुकाउछ भने, जाँच गर्नुहोस्।
बेली फ्याट लुकाउनको लागि फेसन तरिकाहरू:
यस प्रिन्टले तपाईंको शरीरको फ्याटलाई लुकाउन सक्छ र के अनुमान लगाउँछ, यो पनि ट्रेन्डि is हो! पातलो र फेसनल देखिनको लागि तपाईं पशु प्रिन्ट लगाउन सक्नुहुन्छ।
पूरा आस्तीन ब्लाउजको साथ साड़ी
साडीले तपाईंलाई पातलो देखिन्छ र तपाईंको पेटको बोसो पनि लुकाउन सक्छ। यो सबै तपाईं यसलाई बोक्ने तरिकामा निर्भर गर्दछ। ऐश्वर्या आफ्नो गर्भावस्था पश्चात वजन को लागी स्क्यानर अन्तर्गत छ। यसलाई लुकाउन, उनी पूर्ण आस्तीन ब्लाउजको साथ जर्जेट साडी लगाउन छनौट गर्छिन्। स्मार्ट फेसन चाल!
कुर्टिसहरू परम्परागत भारतीय ट्यूनिकहरू हुन् जसलाई फिटिंग प्यान्ट, जीन्स, लेगिंगहरू वा चुरिदार लगाउन सकिन्छ। यी प्रवाहित कुर्तिहरूले तपाईंको पेटको फ्याट लुकाउन सक्छन् र ती पनि क्लासिक देखिन्छन्। रद्दी गहना र जोधपुरी च्यापलहरूको साथ यो साधारण लुक एक्सेसराइज गर्नुहोस्।
कालो एक उत्कृष्ट र is्ग हो जुन तपाइँ पातलो देखिन र कम त्रुटिहरू पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि लेस यस मौसममा प्रचलनमा छ, तपाईं कालो मा यस्ता फीता संगठनहरू प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले बाक्लो बेल्टको साथ यसलाई एक्सेसोरिस गर्नुभयो।
यो एक उत्कृष्ट फेशन ट्रिक हो जुन महिलाले पेटमा फ्याट लुकाउनको लागि लागू गर्न सक्दछन्। फ्रिलहरूले तपाईंको शरीरका त्रुटिहरू लुकाउन सक्छ र स्टाइलिश देखिन्छ। चम्किलो र colorsहरू जस्तै पहेलो वा नियोन सुन्तलामा फेसनयुक्त तातो हेर्नको लागि जानुहोस्।
धेरै सेलिब्रेटीहरूले साम्राज्य कम्मरको साथ आउटफिटहरू उठाएर उनीहरूको थोरै वा टुक्रिएको पेटको बोसो लुकाउँछन्। यो बोल्ड र खतरनाक रूपमा गहिरो V-घाटा कट साम्राज्य कम्मर गाउन एक भारी कम्मर लुकाउन सही छ।
यो पेटको फ्याट लुकाउनको लागि अर्को फेसन ट्रिक हो र यो उहि समयमा फेसनशील देखिन्छ। निलो र हरियो फ्लोरल कम जनावर कफ्तान केवल वाह हो! रेशमको लागि जानुहोस् र कपासलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। रेशम शरीरमा बग्दछ र स्त्री देख्छ।
तिनीहरू ट्रेन्डि are र स्टाइलिश पनि देखिन्छन्। रातो जस्तो कालो चमकको रumps्गको जम्पसुट लगाउनुहोस् वा कालोको साथ सरल जानुहोस्। तपाईंको मनपर्ने ठूलो वा सानो बेल्टको साथ एक्सेसराइज। अग्लो र पातलो हेर्न हाई हिल लगाउनुहोस्।
बेली फ्याट लुकाउन, सधैं सही भित्री पोशाक लिनुहोस्। आकार आकारको पोशाक वा कार्सेट उदाहरणका लागि शरीरका त्रुटिहरूलाई लुकाउन सक्छ र कुनै पनि पोशाकमा तपाईंलाई सही देखिन्छ।
यो साधारण टुक्राहरू हो जुन टमा पेट बोक्ने आइमाईहरूले खसाल्न सक्छन। गाँठ कमरको मुनि छ। यसैले, पेट फ्याट सजिलै त्यस्ता संगठनहरूमा लुकाउन सकिन्छ। त्यस्ता कपडाहरूमा स्टाइलिश देखिन उच्च हिल लगाउनुहोस्।
नट गरिएको शर्टहरू
बेली फ्याट भएका महिलाहरूले शर्ट लगाउन सक्दछन् उनीहरूको ठूलो पेटलाई नदेखी। पट्टिमा नटको शर्ट मन पर्छ। स्ट्रिप्सले स्लिम फिगरको एक भ्रम प्रदान गर्दछ र गाँठहरूले तपाईंको पेटको बोसो लुकाउन मद्दत गर्दछ।
तपाईं ज्याकेटको साथ सादा अनौपचारिक दृश्य एक्सेसराइज गर्न सक्नुहुनेछ, पेट फ्याट एकै समयमा लुकाईरहेको छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं फिटिंग शीर्ष वा टी-शर्ट तल मुनि लगाउनुहुन्छ ताकि शरीरको आकार ज्याकेटमा उत्तम रूपमा फ्याँकिएको होस्।
फ्लोर लम्बाइ गाउन
लामो लम्बाइले शरीरका त्रुटिहरू लुकाउनको लागि चमत्कार गर्न सक्छ विशेष गरी बोसोको मध्यम शरीर। यस जस्तो लुज फिटिंग गाउनहरू बहुमुखी, साँझको लागि स्टाइलिश र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले पेटको फ्याटलाई पनि लुक्छ जस्तो देखिन्छ।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि ज्याकेटहरूले तपाईंलाई मोटो बनाउन सक्छ भने, फेरि सोच्नुहोस्! एक टी संग राम्रो फिट संरचित ज्याकेट स्टाइलिश देख्न सक्छ र यसले तपाइँको लागि फेसन ट्रिकको रूपमा पनि काम गर्दछ। छाला टीहरू पेटका बोसो भएका महिलाहरूका लागि उपयुक्त छन्।
कसरी थाहा छ कि एक केटी तपाईं माया गर्नुहुन्छ
भारतमा भिटामिन बी समृद्ध खाद्य पदार्थ
घरमा घाँटी दुखाई कसरी निको पार्ने
पाठको माध्यमबाट केटीलाई कसरी प्रभावित गर्ने
मनीष मल्होत्रा ​​द्वारा डिजाइनर सूट डिजाइन
कपालका लागि पकाउने सोडाको प्रयोग गर्दछ
कसरी गालाबाट बोसो गुमाउने